Tea muhari Fekitori - China Tea poto vagadziri, Vatengesi
❤ [MULTI-CHINANGWA & UNOGONESESA]: magirazi egirazi anokwanisa ndiyo saizi yakanaka yekuchengetera zvinonhuwira, mahebhu, jamu, zvinochengetedza, tii uye nezvimwe. Kukura kwega kwega kwakaringana kushandiswa kwezuva nezuva kwemba.
❤ [HUPENYU & KUSVIKIRA]: Magirazi edu ezvinonhuwira emidziyo isiri-chepfu uye isina BPA midziyo ine hutano uye yakachengeteka kumhuri yako. Inopa kukunda kwakanyanya kuputsa. Seti yega yega inouya yakarongedzwa zvakachengetedzeka mubhokisi rine vapatsanuri kudzivirira kuparara panguva yekutakura.
❤ [FRESHER & CLEANER]: Flip-pamusoro mabheji ari nyore kuvhura nekuvhara, uye yakafara-muromo inoita kuti zvive nyore kuzadza nekuparadzira. Chigadziko chegirazi chega chega chakavharwa zvakanaka, chakagadzirwa nesilic gasket uye nesimbi isina kukiya simbi yekukiya kuti uve nechokwadi chekuti chikafu chako chinogara chakachena, chitsva uye chakachengeteka uchiri mukuchengetedza.
❤ [FASHION STYLE & EASY TO DUDINGUISH]: Iyo chirongo ine dhizaini dhizaini iri kune ese imba nebhizinesi. Shandisa mudziyo kuti ushandire kofi, tii, jongwe kana kugadzira hunyanzvi.
❤ [ZVINOGONESESEDZWA]: Zvirongo zviri nyore kusuka uye zvinogona kushandiswazve kakawanda.Girazi haridzikise, harigone kunhuwa, kana kudonhedza makemikari muchikafu.
500 ~ 1000ml läpinäkyvä clasp girazi chirongo